aluminium oksaydh sulfate aluminium biyaha sulfate sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Al2O3 + 6NAHSO4 → Al2(NA4)3 + 3H2O + 3Na2SO4
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al2O3 (aluminium oxide) uga falcelisa NaHSO4 ()?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Al2 (SO4) 3 (aluminium sulfate) iyo H2O (biyaha) iyo Na2SO4 (sodium sulfate)?
Dhacdada ka dib Al2O3 (aluminium oxide) waxay la falgashaa NaHSO4 ()
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Al2O3 + 6NAHSO4 → Al2(NA4)3 + 3H2O + 3Na2SO4
aluminium oksaydh sodium hydroxide fluoride hydrogen biyaha Sodium hexafluoroaluminate; Sodium aluminium hexafluoride
1 6 12 9 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Al2O3 + 6NaOH + 12HF → 9H2O + 2Na3AlF6
Waa maxay xaalada falcelinta ee Al2O3 (aluminium oxide) oo la falgala NaOH (sodium hydroxide) oo la falgala HF (hydrogen fluoride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo Na3AlF6 (Sodium hexafluoroaluminate; Sodium aluminium hexafluoride)?
Dhacdada ka dib Al2O3 (aluminium oxide) waxay la falgashaa NaOH (sodium hydroxide) waxay la falgashaa HF (hydrogen fluoride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Na3AlF6 (Sodium hexafluoroaluminate; Sodium aluminium hexafluoride), oo soo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Al2O3 + 6NaOH + 12HF → 9H2O + 2Na3AlF6
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Na3AlF6 (Sodium hexafluoroaluminate; Sodium aluminium hexafluoride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na3AlF6 (hydrogen fluoride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na3AlF6 (Sodium hexafluoroaluminate; Sodium aluminium hexafluoride) badeecad ahaan?
aluminium oksaydh sulfate sodium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Al2O3 + Na2SO4 →
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Al2O3 (aluminium oxide) ee ka falcelisa Na2SO4 (sodium sulfate)?
Dhacdada ka dib Al2O3 (aluminium oxide) waxay la falgashaa Na2SO4 (sodium sulfate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda alaabtu ka muuqato dhammaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Al2O3 + Na2SO4 →
Al2O3 + 3CO2 →
aluminium oksaydh carbon dioxide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Al2O3 + 3CO2 →
What is reaction condition of Al2O3 (aluminium oxide) reacts with CO2 (carbon dioxide) ?
Phenomenon after Al2O3 (aluminium oxide) reacts with CO2 (carbon dioxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Al2 (CO3)3, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Al2O3 + 3CO2 →
What are the chemical and physical characteristic of (carbon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh () alaab ahaan?